लामखुट्टेको नियन्त्रणबाट रोगको रोकथाम - Hesperian Health Guides
लामखुट्टेको नियन्त्रणबाट रोगको रोकथाम
हेस्पेरियन स्वास्थ्य विकि > डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण > लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरु > लामखुट्टेको नियन्त्रणबाट रोगको रोकथाम
लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरु
डेगुं, पहेंलो ज्वरो, जिका र चिकुनगुनिया
डेगुं ज्वरो (Breakbone ज्वरो)
पहेंलो ज्वरो (Yellow Fever)
वेस्ट नाइल भाईरस (West Nile Virus)
ईन्सेफलाईटिस (lymphatic filariasis)
लामखुट्टेको प्रजनन हुनबाट रोक्ने
समूदायले लामखुट्टेबाट सर्ने रोगबाट जोगिन पहल गर्ने
लामखुट्टेको टोकाईबाट जोगिएर र घरमा वा समूदायमा लामखुट्टेको प्रजनन को नियन्त्रण गरेर लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरुको रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
यसको लागि बिभिन्न किसिमका लामखुट्टेहरूले प्रजनन गर्न रुचाउने स्थान, आराम गर्न रुचाउने ठाउँ र टोक्ने समयको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि मलेरियाको लामखुट्टेहरु ग्रामिण भेगमा बढी पाईन्छन् र तलाउ (swamps) र अन्य जमेको पानीमा प्रजनन गर्दछन् । डेगुं र पहेंलो ज्वरोका लामखुट्टेहरु ग्रामिण र शहरी दुबै भेगमा घरभित्र र यसको नजिकै पानी जम्मा हुने वा भन्डारण गरिने ठाउँमा बस्छन् । घरभित्र धेरै लामखुट्टेहरु छायाँ परेको, अँध्यारो ठाउँहरु जस्तोकी टेबल वा ओछ्यान मुनि वा कुनाहरुतिर लुकेका हुन्छन् । घरबाहिर चाहिं छायाँ परेको ठाउँहरुमा पाईन्छन् ।
लामखुट्टेको बारेमा के थाहा छ ? तिनको टोकाईबाट कसरी बच्ने ?
विहान सवेरै र साँझको बेलामा यिनले बढीजसो टोक्छन् ।
त्यस्तो बेलामा साना वालवालिकाहरुलाई झुलभित्र राख्नुपर्छ ।
साँझको बेलामा बाहिर ननुहाउन सबैलाई सचेत गराउनुपर्छ !
१ लामखुट्टेले रोग सार्ने तरिका
२ लामखुट्टेको टोकाईबाट जोगिने
२.१ झुलले लामखुट्टेको टोकाईबाट जोगाउन सहयोग गर्छ
३ लामखुट्टेको टोकाईको नियन्त्रणको लागि लामखुट्टे धपाउने सुरक्षित रसायन (Repellents) र किटनाशक बिषादी
३.१ लामखुट्टे मार्न किटनाशक विषादी छर्कने
३.२ किटनाशक विषादीले लामखुट्टेलाई मारे पनि मानिसहरुलाई हानी गर्न सक्छन्
लामखुट्टेले रोग सार्ने तरिका
रगतमा जिका, डेगुं, चिकुनगुनिया, पहेंलो ज्वरो वा मलेरिया भएको ब्यक्तिलाई लामखुट्टेले टोक्छ ।
त्यहि लामखुट्टेले पहिलो संक्रमित ब्यक्तिबाट ल्याएको भाईरस वा परजीवी स्वस्थ मानिसलाई टोकेर सार्छ ।
अब यो ब्यक्ति पनि संक्रमित हुन्छ र नयाँ लामखुट्टेले उसलाई टोक्छ
त्यहि लामखुट्टेले फेरि अरु मानिसलाई पनि टोकेर रोग सार्छ ।
लामखुट्टेको टोकाईबाट जोगिने
पाखुरा, खुट्टा, पैतला, घाँटी र टाउकोमा जतिसक्दो बढी छोपिने किसिमको लुगा लगाउनुपर्छ (जस्तोकि लामो ज्याकेट र लामो पाईन्ट वा स्कर्ट, टाउको छोप्ने कुनै कपडा, जुता वा मोजा सहित चप्पल उपयोगी हुन्छन्) ।
झ्याल, ढोका र प्वाल भएको कुनै पनि ठाउँमा जाली लगाउनुपर्छ । झ्यालमा भएको कुनै पनि प्वालहरुलाई टाल्नुपर्छ र जालीमा भएको प्वाललाई पनि मर्मत गर्नुपर्छ ।
जाली नभएको अबस्थामा लामखुट्टे बाहिर गएपछि झ्यालढोका बन्द गर्नुपर्छ ।
पंखा लगाएमा समेत त्यसको हावाले लामखुट्टे भाग्छन् ।
राती र दिउँसै पनि आराम गरेको बेलामा झुल लगाउनुपर्छ ।
बाहिर सुतेको बेलामा समेत लामखुट्टेबाट जोगिन झुल लगाउनुपर्छ ।
झुलले लामखुट्टेको टोकाईबाट जोगाउन सहयोग गर्छ
झुलले लामखुट्टेबाट हुने रोगहरुबाट २ किसिमले जोगाउँछन् । कुनै पनि प्वाल र खाली ठाउँ नभएको झुलले झुलभित्र भएको ब्यक्ति समक्ष लामखुट्टे पुग्न दिंदैन । साथै किटनाशक बिषादीबाट प्रशोधित झुलले त्यहाँ टाँसिने लामखुट्टेलाई पनि मार्छ । त्यसकारण समूदायमा रोग फैलाउने लामखुट्टेको संख्या घटाउन सबै घरको प्रत्येक ओछ्यानमा एक झुलको प्रयोग गर्नुपर्छ । कार्यक्रमहरुले सबैलाई किटनाशक बिषादीबाट प्रशोधित झुलहरु बाँड्दछन् किनकी सबैले त्यसको प्रयोग गरेमा लामखुट्टेको संख्यामा कमी आई मलेरिया पनि कम हुन्छ ।
सानो प्वालहरुलाई यसरी दोबारेर सिलायो भने झुल धेरै टिक्छ । पछि पनि च्यातियो भने तिमी त तिम्रो भाईले यसरी सिलाउनुपर्छ ।
लामखुट्टेलाई टोक्न नदिन झुलको किनारहरु सधैं ओछ्यानमुनी पार्नुपर्छ ताकि कुनै प्वालहरु नहोउन् । प्वाल र च्यातिएको भागलाई छिट्टै मर्मत गरीहालेमा मात्रै झुलले काम गर्छन् ।
किटनाशक बिषादीबाट प्रशोधित झुलहरुको उपयोगिता त्यसमा लागाईएको किटनाशक बिषादीले काम गर्ने समय (१ बर्ष वा केहि बर्ष) मा निर्भर रहन्छ । त्यसकारण त्यस्तो झुल किन्दा वा बितरण कार्यक्रम मार्फत पाउँदा किटनाशक बिषादीले कति लामो समयसम्म काम गर्छ भन्ने जानकारी लिनुपर्छ र झुललाई धेरै धुँदा त्यसको प्रभावकारिता घट्न सक्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ ।
झुल पुरानो हुँदै गएपछि किटनाशक बिषादी पनि सकिएर जान्छ । झुलको अबस्था राम्रै भएमा भने त्यसमा नयाँ किटनाशक बिषादीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर धेरै च्यातिएको वा प्वाल परेको भएमा भने नयाँ झुल नै सुरक्षित हुन्छ । पुरानो झुलमा नयाँ किटनाशक बिषादी प्रयोग गर्नुपर्दा पञ्जा लगाउने र शरिरमा र शरिरभित्र बिषादीको प्रबेश नहुन दिन निर्देशिकाको राम्रोसँग पालना गर्नुपर्छ ।
किटनाशक बिषादीबाट प्रशोधित झुललाई बच्चाहरुले चुस्न र चपाउनबाट जोगाउनुपर्छ । किटनाशक बिषादीले माछा, किरा, जनावर र तल्लो भागमा रहेका मानिसहरुलाई हानी हुनसक्ने भएकोले नदी वा पानीको श्रोतमा त्यस्तो झुललाई पखाल्नु हूँदैन ।
लामखुट्टेबाट हुने अन्य स्वास्थ्य समस्याहरुको रोकथामको लागि झुलहरु उपयोगि हुन्छन् । डेगुं, पहेंलो ज्वरो, जिका र चिकुनगुनिया सार्ने लामखुट्टेहरुले भने दिनको समयमा टोक्छन् । त्यसैले झुलको प्रयोगले दिनको समयमा सुत्ने वा आराम गर्ने साना बालबच्चा वा अरुलाई पनि यस्ता रोगहरुबाट पनि जोगाउन सकिन्छ । साथै झुलको प्रयोगले पहिले नै विरामी भईसकेकालाई लामखुट्टेले टोक्न नपाउने भएकोले अरुलाई त्यो रोग सर्नबाट समेत जोगिन्छ ।
लामखुट्टेको टोकाईको नियन्त्रणको लागि लामखुट्टे धपाउने सुरक्षित रसायन (Repellents) र किटनाशक बिषादी
Repellents भनेका लामखुट्टेले नरुचाउने रसायनहरु भएकोले त्यसबाट टाढै भाग्छन् । किटनाशक बिषादीहरु त्यस्ता रसायनहरु हुन् जुन छर्किएको वा लगाईएको सतह, भित्ता वा झुलमा लामखुट्टे बसेमा मर्छन् ।
छालाको हकमा प्राकृतिक repellents जस्तो citronella, निमको तेल, lemongrass बाट निकालेको झोल वा basil को पात प्रयोग गर्न सकिन्छ । अथवा यि मध्येको समिश्रण भएका रासायनिक repellents को प्रयोग गर्न सकिन्छः DEET, Picardin (KBR 3023, icaridin), IR3535, वा PMD र lemon eucalyptus यौगिकहरुबाट निकालिएको अन्य तेल । यस्ता repellents बिशेषगरी बच्चाहरुको सुरक्षामा उपयोगी भएपनि उक्त उत्पादन बच्चाको लागि सुरक्षित भएको कुराको सुनिश्चितताको लागि त्यसमा लगाईएको लेबल राम्रोसँग पढ्नुपर्छ । लेबलमा कतिपटक (कति घण्टाको फरकमा लगाउने) लगाउने भन्ने पनि जानकारी दिईएको हुन्छ ।
जिका भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य निकायहरुले महिलाहरुलाई लामखुट्टे धपाउने सुरक्षित रसायन (repellents) उपलब्ध गराउँछन् किनकी जिकाले महिलाको गर्भाबस्थालाई हानी गर्नसक्छ ।
लामखुट्टेलाई भगाउनको लागि झुल, लुगाकपडा वा जुत्तामा Permethrin भन्ने रसायन छर्किन सकिन्छ । तर छालामा भने त्यसको प्रयोग गर्नुहुँदैन । छालामा रसायन नपरोस् भन्नको लागि लुगामा छर्किसकेपछि त्यसलाई सुक्न दिएर मात्र लुगा लगाउनुपर्छ । लेबलमा दिईएको निर्देषनहरु राम्रोसँग पालना गर्नुपर्छ ।
लामखुट्टे चक्की (coils) को प्रयोग उत्तम repellent नपाईएमा मात्रै गर्नुपर्छ । mosquito coils बाट निस्कने धुँवा वा लामखुट्टे भगाउनका लागि धुँवा लिकाल्न गरिने अन्य बिधिबाट निस्केको धुँवाबाट श्वाशप्रश्वासमा हानि गर्छ ।
लामखुट्टे मार्न किटनाशक विषादी छर्कने
सरकारको तर्फबाट वा अन्य संस्थाहरुबाट प्रत्येक बर्ष लामखुट्टेहरु वढी हुने समयमा लामखुट्टे मार्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी घरभित्रको भित्ताहरुमा किटनाशक विषादी छर्कने गरिन्छ । यसलाई Indoor Residual Spraying (IRS) भनिन्छ । किटनाशक विषादी छर्कने ब्यक्तिले श्वासबाट वा छाला वा मुखबाट छोईएर शरिरमा विषादी प्रवेश नगरोस् भन्नको लागि सुरक्षा कवच लगाउनुपर्छ । मलेरियाको रोकथामको लागि कुनै क्षेत्रको सबै घरहरुमा छर्किएको खण्डमा यस किसिमको छर्कने विधिले उत्तम काम गर्दछ । किटनाशक विषादी लगायतका सबै रसायनहरुलाई बालबच्चाहरुको पहुँचबाट जोगाएर राख्नुपर्छ ।
किटनाशक विषादीले लामखुट्टेलाई मारे पनि मानिसहरुलाई हानी गर्न सक्छन्
किटनाशक विषादीहरु विष हुन् । त्यसकारणले त तिनले लामखुट्टेलाई मार्छन् । प्रायः सबै किटनाशक विषादीहरुले मानिसहरुलाई पनि हानी पुर्याउँछन् । त्यसकारण लामखुट्टे नियन्त्रणको उत्तम उपाय भनेको लामखुट्टेले प्रजनन गर्ने ठाउँहरु हटाउनका लागि सामूदायिक प्रयासहरु गर्नु हो । त्यस्ता प्रयासहरु प्रसस्त हुन सकेनन् र लामखुट्टे मार्नको लागि किटनाशक विषादीको प्रयोग गर्नुपरेमा तिनबाट मानिसहरुलाई हुने हानी कम गर्ने उपायहरु छन्:
आफुले प्रयोग गर्न खोजेको किटनाशक बिषादिले त्यस ठाउँका लामखुट्टेलाई मार्ने कुराको शुनिश्चितता गर्नुपर्छ । किनकी कुनै ठाउँहरुमा केहि किटनाशक बिषादीहरुसँग लामखुट्टेहरुको प्रतिरोध क्षमता बिकास भईसकेको हुन्छ । यसको मतलब त्यस किटनाशक बिषादिले लामखुट्टेलाई थप मार्न नसक्नु हो ।
उपलब्धताको आधारमा न्यूनतम खतारायुक्त किटनाशक बिषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसको जतिसक्दो कम मात्राको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई कसरी मिसाउने र प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा निर्देशिका हेर्नुपर्छ ।
हवाईजहाज वा ट्रकबाट किटनाशक बिषादी छर्कनु भनेको अत्यन्तै खतरनाक बिधि मानिन्छ किनकी यसबाट अनावश्यक रुपमा सबैकुरामा बिषादी पर्छ र जसले गर्दा लामखुट्टेलाई भन्दा बढी मानिसलाई हानी हुन्छ ।
उपलब्ध भएमा लामखुट्टे विकसित हुनुभन्दा अघि नै लार्भालाई मार्ने किटनाशक विषादी (larvicides) को प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्तो किसिमका किटनाशक बिषादीहरु वयष्क लामखुट्टेलाई मार्ने किटनाशक विषादीभन्दा निकै नै सुरक्षित मानिन्छन् । तर पिउने पानीमा यसको प्रयोग भने गर्नुहुँदैन ।
यस्ता रसायनहरुको प्रयोग गर्नुपर्दा सधैं पञ्जा, चस्मा र सबै शरिरलाई ढाक्ने कपडा लगाउनुपर्छ । नाक मुख छोप्नको लागि सुरक्षात्मक मास्कको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । काम सकिएपछि आफूलाई र लुगालाई होशियारीपूर्वक पखाल्नुपर्छ । खानु, पिउनु र अनुहार छुनु अघि रारोसँग हात पखाल्नुपर्छ ।
किटनाशक विषादीबाट बालबच्चाहरु सुरक्षित रहेको कुराको सुनिश्चित हुनुपर्छ । वयष्कको तुलनामा बालबच्चाको सानो, विकसित अबस्थाको शरिरलाई किटनाशक विषादीबाट हानी पुग्ने सम्भावना वढी हुन्छ ।
डिडिडि जस्ता किटनाशक विषादीहरु मानिस र वातावरणको लागि अत्यन्त खतरनाक हुने भएकोले तिनको प्रयोग पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्छ ।
"http://ne.hesperian.org/w/index.php?title=New_Where_There_Is_No_Doctor:लामखुट्टेको_नियन्त्रणबाट_रोगको_रोकथाम&oldid=248" बाट निकालिएको
अरू भाषाहरूमा বাংলা English Kreyòl ayisyen ລາວ ភាសាខ្មែរ Português 中文